Yenza iMicrosoft Your Rocks kwi-Garden Garden
Ukukhulisa i-Chemical Garden
IMicrosoft Rocks , ngamanye amaxesha kuthiwa yi-Chemical Garden okanye i-Crystal Garden, ngumveliso obandakanya ipakethi encinane yamatye ahlukeneyo kunye "nesisombululo semilingo." Uchithachitha iindonga phantsi kwe-ingxowa yeglasi, engeza isisombululo somlingo, kwaye amatye akhule abe yimibhoshongo yemikhemikhali ekhangelelweyo emasimini ngosuku. Ukukhula kwe-crystals ekugqibeleni abantu abakhetha ukungalindelanga iintsuku / iiveki kwiziphumo.
Emva kokuba umyezo wekhemikhali ukhulile, isisombululo semilingo (ngokucophelela) sidluliselwa kwaye satshintshwa ngamanzi. Kule ngongoma, umyezo ungagcinwa njengomhlobiso phantse ngonaphakade. Amatye amagqabantshelo athobisa ukunyusa iminyaka engama-10 + kuba izitye kunye nesisombululo asinakudliwa! Nangona kunjalo, abantwana abancinci baya kunandipha ukunyuka kwemilingo, ukubonelela ukuba banokuqapha abantu abadala.
Indlela uMicrock Rocks Work
I-Magic Rocks yimiba yesoyile yensimbi eye yazinziswa ngokusabalalisa kwi-aluminium hydroxide okanye i-alum. Isisombululo somlingo sisisombululo se-silicate solicate (Na 2 SiO 3 ) emanzini. I-salts yensimbi isabela njani nge- silicate ye-silicate ukwenza i-characteristic precipitant (iibhokhwe zamachiza malunga ne-4 "phezulu).
Khulisa IYakho Yomyezo WamaChiza
Amatye emilingo atholakala kwi-intanethi kwaye ayinto engabizi, kodwa unokuzenza. Ezi zizaziso ezisebenzisayo ukwenza imilingo.
Ezinye zezibala zifumaneka ngokulula; baninzi bafuna ukufikelela kwi-lab jikelele yeebhem.
I-White - calcium chloride (efumaneka kwindawo yokuhlamba yezinye izitolo)
I-nitro ehamba phambili emhlophe (II) nitrate
I-Purple - manganese (II) i-chloride
Ubuluhlaza - ubhedu (II) i-sulfate (i-chemical chemistry lab yamachiza, isetyenziselwa i-aquaria kunye ne-algicide yamachibi)
I-Red - cobalt (II) i-chloride
I-Pink - manganese (II) i-chloride
I-Orange - isinyithi (III) i-chloride
I-Yellow - iron (III) i-chloride
I-Green-nickel (II) i-nitrate
Yenza umyezo ngokubeka umgca onqabileyo wesanti ngaphantsi kwe-beaker ye-600-ml. Yongeza umxube oqulethe isisombululo se-sodium silicate nge-100 ml yamanzi adibeneyo. (Unokwenza i-sodium silicate ngokwakho.) Yongeza iikristali okanye i-chunks ze-salts zetsimbi. Ukuba ungeze ezininzi 'izitye' isisombululo siya kuba sezulu kwaye kufike imvula. Iqondo lokunyusa kwexesha elincinci liyakunika insimu yegadi yemichiza. Xa umyezo sele ukhule, ungathatha isisombululo se-sodium silicate ngamanzi acocekileyo.
Hlanganisa i-Tattoo Ink yakho
Dweba i-3D Pyramid kwi-Perspective
Ukuthengisa kunye nokufunyanwa Isigama kwisigaba se-ESL
Iibhakethi zendawo ze Craps